नयाँ प्रधानमन्त्रीमा बाबुरामको नाम अगाडी , यस्तो छ तिन दलको तयारी ! - Rising Dainik
नयाँ प्रधानमन्त्रीमा बाबुरामको नाम अगाडी , यस्तो छ तिन दलको तयारी !
May 4, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on नयाँ प्रधानमन्त्रीमा बाबुरामको नाम अगाडी , यस्तो छ तिन दलको तयारी !
काठमाडौँ / माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । बाबुरामलाई भेट्न टोेखास्थित निवासमै पुगेका प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।साँझ ७ बजेबाट भएको भेट ८ बजे सकिएको थियो । एक घन्टा लामो भेटमा दुई नेताबीच सत्ता समिकरणबारे कुराकानी भएको थियो ।
त्यसअघि प्रचण्डले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका थिए ।प्रचण्डले काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच सत्ता समिकरणको गृहकार्य गरिरहेका छन् । उ नले काँग्रेस या जसपामध्ये एकलाई सरकारको नेतृत्वका लागि मनाउन लागिपरेका छन् । तर, दुवै दलको आ आफ्नै दाबी गरेको बुझिएको छ ।
खाएको केही घन्टाभित्रै कोभिडलाई मा र्ने एक च क्की बनाउँदै गरिएको एक विज्ञले बताएका छन् । यो चक्की बजारमा आएपछि लकडाउन ल’गाउन नपर्ने बताइएको छ । केही महिनाभित्र यस चक्कीमाथि थप अनुसन्धान गरिने र प्रयोग गर्न ला यक ठ हरिएमा बजारमा ल्याइने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
ग्लास्गो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक केभिन ब्लाइथ चक्की अनुसन्धान टोलीका प्रमुख हुन् । उनले भने, ‘एन्टीभाइरल च’क्कीले काम गरेमा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । यसले काम गरेमा स्वास्थ्य सेवामाथि च रम द’ बाब पर्ने छैन किनकि रोगीहरू अस्पताल आउनै पर्दैन ।
अनि लकडाउन वा अन्य किसिमका क ठोर नि यन्त्रण पनि लगाउन पर्दैन । कोभिड पोजिटिभ भएको केही दिनभित्र च क्की खाए मा शरीरमा कोरोनाभाइरस म र्ने अपे क्षा गरिएको छ । https://www.etajakhabar.com/ बाट साभार गरीएको हो ।
माधव नेपाल पक्षको २१ सांसदको सामूहिक राजीनामा बालुवाटार पुग्यो ! नामावली सहित
January 24, 2021 Ramash Kunwar
माधव नेपालको जीवनमै पहिलोपटक यो के आईलाग्यो, अब के गर्लान ?
March 25, 2021 Ramash Kunwar
फेरी राजा आउदै देशमा ? भर्खरै बुटवलमा जनता सबै निस्किए ….